Khabineti Door Hinges Vagadziri & Vatengesi - China Khabineti Door Hinges Fekitori
Khabineti Musuwo Chokwadi Nyoro Yakapfigwa Yakavanzwa Hinge
Musuwo wedare remakurukota rakanyorovera padyo rakavanzwa hinge yakagadzirwa ne zinc alloy zvinhu. Iyi hinji inowanzo shandisa yealuminium furemu kabati remukova. Iyo hinge yakavanzika zvechokwadi inosiyana neyechinyakare yechinyakare fenicha hinji. Iwe hausi kuzoona iyo hinge muviri pane kabati padivi bhodhi. Ita yako yemidziyo kabhodhi kutarisa kwakanaka. Kana iwe uchifarira hinji yedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
H11 American mhando ipfupi ruoko kumeso furemu hinji 1/2 kufukidza
Nhanganyaya:H11 American mhando ipfupi ruoko kumeso furemu hinge 1/2 yakafukidzwa kazhinji inoshandisa kumeso furemu kicheni & yekugezera makabati Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: H11
US2D12 American mhando 2D kugadzirisa hinji
Nhanganyaya:US2D12 American mhando 2D yekugadzirisa hinge inowanzo shandiswa kumeso fureni kicheni & yekugezera makabati Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US2D12
US2D12S 2D Yakapfava padhuze compact Face Chiso Hinge 1/2 ″
Nhanganyaya:US2D12S 2D Soft pedyo compact Face Frame Hinge 1/2 ″ inowanzo shandiswa kumeso fureni kicheni & yekugezera makabati. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US2D12S
Chakavanzika Chiso Simbi Hinge 3/4 ″ yeAmerican mhando makabati
Nhanganyaya:Chakavanzika kumeso furemu hinge 3/4 ″ yeAmerican mhando makabati anowanzo shandisa kumeso fureni kicheni & yekugezera makabati. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US2D34S
US2D114 American mhando 2D kugadzirisa hinji
Nhanganyaya:US2D114 American mhando 2D yekugadzirisa hinji inowanzo shandiswa kumeso ficha kicheni & yekugezera makabati. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US2D114
3D Kugadziridza kumeso furemu hinge 1 inch yakafukidza yekicheni & yekugezera makabati
Nhanganyaya:3D Kugadziridza kumeso furemu hinge 1 padiki kufukidza kwekicheni & yekugezera makabati, pasina zvinyoro-kuvhara, 1, kufukidza, yakarukwa simbi, nickel kuifukidza. With 45mm sikuruwa mugomba muenzaniso, Chinyorwa sikuruu pamusoro kushanda. Cam Kugadziridza uye mana ma tabo ekuisa nyore kuiswa pane kumeso furemu kumucheto. Standard pasuru imwe neimwe isina masikuru, kurongedza kwakakura mutoni.
Muenzaniso Nha .: US3D1
US3D1S American mhando 3D chinja zvakajairika hinji
Nhanganyaya:US3D1S American mhando 3D kugadzirisa zvakajairika hinji inowanzo shandiswa kumeso fureni kicheni & yekugezera makabati. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US3D1S
3D Inogadziriswa musuo hinji yechiso furemu kabati 1/2 ″
Nhanganyaya:3D Inogadziriswa musuo hinji yechiso furemu kabati 1/2 "inowanzo shandisa kumeso fureni kicheni & yekugezera makabati. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US3D12
1/2, Hydraulic nyoro padyo 3D chinjika kicheni kumeso furemu kabhodhi musuo hinji
Nhanganyaya:1/2, Hydraulic nyoro padyo 3D chinjika kicheni kumeso furemu kabati musuo hinji kazhinji inoshandisa kumeso fureni kicheni & yekugezera makabati. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US3D12S
1-1 / 2, Hydraulic musuwo padiki hinji yechiso fureni kicheni & yekugezera makabati
Nhanganyaya:1-1 / 2, Hydraulic musuwo padiki hinji yechiso fureni kicheni & makabati ekugezera anowanzo shandisa kumeso fureni kicheni & makabati ekugezera. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US3D112S
1-1 / 4, Kufukidza 105 Dhigirii 2 Cam Dhinda muFace Frame Cabinet Hinge
Nhanganyaya:1-1 / 4 ″ Kufukidza 105 Degree 2 Cam Dhinda muFace Frame Cabinet Hinge inowanzo shandiswa kumeso fureni kicheni & makabati ekugezera. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: US3D114